पराजुली र मुकारूङलाई प्रतिभा- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेपाली गीतिकाव्य तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा खोज अन्वेषण गरी उल्लेखनीय योगदान दिएबापत गीतकार एवं संस्कृतिकर्मी शुभ मुकारुङलाई प्रतिभा पुरस्कार दिइएको छ । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले काठमाडौंमा गरेको समारोहमा उनलाई एक लाख रुपैयाँको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
त्यस्तै २५ हजार रुपैयाँ र दोसल्लासहितको ‘प्रतिभा सम्मान’ द्वारा भने प्रयोगवादी धाराका वशिष्ट कवि गोपाल पराजुलीलाई दिइयो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति एवम् वरिष्ठ कवि बैरागी काइँलाले पुरस्कार र सम्मान हस्तान्तरण गर्दै ‘विदेशमा क्रियाशील संघसंस्थाले नेपालका रहेका स्रष्टालाई सम्मान गर्ने परिपाटीले अन्तरदेशीय सम्बन्ध वृद्धि हुने’ बताए । प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराईले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा डायास्पोरामा रहेका संघसंस्था र स्रष्टाहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको दाबी गरे । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका काव्यविभाग प्रमुख प्रा.डा. हेमनाथ पौडेलले डायास्पोरिक साहित्यको प्रवर्द्धनका लागि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पनि लागिपरेको सुनाए ।
प्रतिभा प्रतिष्ठानका नेपाल संयोजक प्राज्ञ शशी लुमुम्बूले संघको गतिविधि प्रकाश पार्दै सन् २००८ मा बेलायतमा स्थापना भएको प्रतिभा प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म २४ स्रष्टालाई सम्मानित तथा पुरस्कृत गरिएको बताए । त्यस्तै प्रतिभा प्रतिष्ठानका महासचिव मिजास तेम्बेले भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकासमार्फत आफूहरू बेलायतमा नेपाली पहिचान स्थापित गर्न सक्रिय रहेको बताए । कार्यक्रममा गीतकार चूडामणि देवकोटाले पुरस्कृत मुकारुङका योगदानबारे र कवि तथा समालोचक सुरेश हाचेकालीले सम्मानित कवि पराजुलीका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
प्रकाशित : पुस २२, २०७६ ०८:५३
अस्ट्रेलियाको क्लिन स्विप
पुस २२, २०७६ एएफपी
सिड्नी — नाथन लायनले ५० रन खर्चेर ५ विकेट लिँदै खेलमा कुल १० विकेट लिएपछि अस्ट्रेलियाले सोमबार तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा न्युजिल्यान्डलाई २ सय ७९ रनले पराजित गरेको छ । साथै अस्ट्रेलियाले शृंखला ३–० ले क्लिन स्विप पनि गरेको छ ।
अस्ट्रेलियाको सशक्त बलिङ आक्रामणको अफ स्पिनर लायनले नेतृत्व गरेपछि न्युजिल्यान्डको दोस्रो इनिङ्स १ सय ३६ रनमै खुम्चिएको थियो । अस्ट्रेलियाले पर्थ र मेलबर्नको पहिलो दुई टेस्टमा जस्तै न्युजिल्यान्डमाथि ठूलो अन्तरको जित हात पारेको हो ।
अस्ट्रेलिया यस सिजनमा अपराजित छ । टोलीले यसक्रममा घरेलु मैदानमा खेलेको सबै पाँच टेस्टमा विजय हात पार्नेक्रममा पाकिस्तानसँगको दुई टेस्टमा पनि जित हात पारेको थियो । इंग्ल्यान्डमा खेलिएको एसेज शृंखलामा भने अस्ट्रेलिया २–२ को बराबरीमा रोकिएको थियो ।
‘अस्ट्रेलियाको टेस्ट टोलीका लागि यो सिजन निकै राम्रो रह्यो,’ लायनले भने, ‘यसको सदस्य बन्न पाउनु विशेष हो । हामीले प्रभावशाली, गुणस्तरीय खेल खेलेका थियौं । ब्याट्सम्यानले आफ्नो भूमिका निभाउँदै हामी बलरलाई पर्याप्त अवसर दिएका थिए ।’
अस्ट्रेलियाले २१७–२ मा आफ्नो दोस्रो इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेको थियो । डेविड वार्नर १ सय ११ रन बनाई अविजित रहे । उनको यो २४ औं टेस्ट शतक हो । मार्नस लाबसच्यान आउट भएसँगै अस्ट्रेलियाका कप्तान टिम पेनले इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेका थिए । ४ रनमा जीवनदान पाएका लाबसच्यानले ७४ बलमा ५९ रन बनाए । पहिलो इनिङ्समा २ सय १५ रन बनाएका उनी नै म्यान अफ द म्याचमा चुनिए ।
सिड्नी क्रिकेट मैदानको घुमाउरो पिचमा न्युजिल्यान्डले जितनिम्ति ४ सय १६ रन बनाउनुपर्ने कठिन चुनौती पाएको थियो । मिचेल स्टार्कले सानदार बलिङ प्रदर्शन गरेपछि न्युजिल्यान्ड सुरुदेखि नै दबाबमा आयो । उनले २५ रन खर्चेर ३ विकेट लिएको प्रदर्शनमा लायनले कसिलो साथ दिएका थिए ।
‘उनीहरू सबै क्षेत्रमा क्लिनिकल देखिए, पहिलो टेस्टपछि उनीहरूले हामीलाई एकपछि अर्को सत्रमा दबाबमा राखे,’ न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनले भने । भाइरस संक्रमणका कारण उनले यो टेस्ट भने खेलेका थिएनन् । मध्यसत्रमा स्टार्क र लायनले २–२ विकेट लिएपछि न्युजिल्यान्ड २७–४ को स्थितिमा पुगिसकेको थियो । स्टार्कले दुवै ओपनर टम लाथम र टम ब्लुन्डेललाई ५ ओभरभित्र आउट गरे । प्वाइन्टमा लायनले स्तरीय क्याच लिएर ब्लुन्डेललाई पेभेलियन फर्काए भने कार्यबाहक कप्तान लाथम एलबीडब्लूको निर्णयमा रिभ्यू गुमाए ।
लायनले आफ्नो पहिलो ओभरमा जित रावललाई १२ रनमा रिभ्यूबाटै आउट गरे । पहिलो इनिङ्समा उच्च स्कोर बनाएका ग्लेन फिलिप्स शून्यमा लायनको बलमा विकेटकिपर पेनको हातबाट क्याच भए । रोस टेलर २२ रन बनाई प्याट कुमिन्सको बलमा आउट भए । सोक्रममा टेलर न्युजिल्यान्डबाट सबैभन्दा टेस्ट रन बनाउने ब्याट्सम्यान बने । स्टेफन फ्लेमिङको ७ हजार १ सय ७२ रनलाई उछिनेका टेलरको उनको भन्दा २ रन बढी छ ।
ठूलो शट प्रहार गर्ने कोलिन डी ग्रान्डहोमले लायनको बलमा छक्का प्रहार गर्दै आफ्नो अर्धशतक पूरा गरे । तर अर्को बलमा उनले मिडविकेटमा जो बर्न्सलाई क्याच दिन पुगे । डी ग्रान्डहोमले ५२ रन बनाए । जेम्स प्याटिनसनले उत्कृष्ट डाइभिङ क्याच लिएपछि टोड एस्टल १७ रनमा आउट भए । स्टार्कले योर्करमा विलियम सोमरभिलको ७ रनमा मिडल स्टम्प उडाइदिए । बिजे वाटलिङ आउट हुने अन्तिम ब्याट्सम्यान थिए । उनी प्याट कुमिन्सको बलमा १९ रन बनाई आउट भए ।
लाबसच्यानले घरेलु भूमिमा खेलेका पछिल्ला ५ टेस्टमा कुल ८ सय ९६ रन बनाए । उनले खेलेका आठ इनिङ्समा तीन शतक र तीन अर्धशतक छन् । उनी नै यस शृंखलामा म्यान अफ द सिरिजमा चुनिए ।